ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေအနေအပေါ် သတိပေးချက် ၅ ချက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြောကြား - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဂူတာရက်စ်က ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် ကုလသမဂ္ဂညီလာခံတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အဓိက လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပြောကြားခဲ့ရာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေအနေအပေါ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ ရာသီဥတုအန္တရာယ်အကျပ်အတည်း၊ နည်းပညာသစ်များအား အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ဟူ၍ သတိပေးချက် ၅ ချက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာကြီးသည် “အမြင့်ဆုံးအဆင့် အန္တရာယ်မီး သတိပေးချက်” နှင့် ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဂူတာရက်စ်က ထောက်ပြပြောဆိုသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် မသေချာမရေရာမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်း မမျှတသည့်အခြေအနေ ပို၍ ဆိုးဝါးလာခြင်း၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု မြင့်တက်လာခြင်း၊ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးစိတ်ကွဲများ ပျက်သုဉ်းပျောက်ကွယ်မှု ဆိုးဝါးလာခြင်း၊ နိုင်ငံရေးလှိုင်းဒဏ်နှင့်စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု များပြားလာခြင်း၊ နိုင်ငံကြီးများအကြား မယုံကြည်မှုက အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်မြန်နှုန်းမြင့်လမ်းကြောင်းတွင် အမုန်းတရားနှင့် လိမ်ညာမှုများဖြင့် ပိတ်ဆို့နေခြင်း တို့နှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများအား အစီရင်ခံပြောကြားနေသော ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဂူတာရက်စ်အား ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်က ကို တွေ့ရစဉ် (Eskinder Debebe/UN Photo/Handout via Xinhua)
သတိပေးချက် ၅ ချက်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ကျရှုံးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ဂူတာရက်စ် ယူဆထားသည်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဝေငှမှု မမျှတခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည့် အန္တရာယ်၊ လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အရေးကြီးမှု၊ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အရေးတကြီးလိုအပ်နေမှု၊ ပြည်သူ့ဗဟိုပြု နည်းပညာသစ်တည်ဆောက်ရေးကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီမံခန်ခွဲမှုစနစ်တွင် အသုံးချရန် လိုအပ်မှုနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကို ဖယ်ရှားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ရန် အရေးကြီးမှုတို့အား ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤသတိပေးချက် ၅ ချက်ကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမည်ဆိုသည်က အနာဂတ် နှစ်ပေါင်းဒါဇင်နှင့်ချီသော လူသားတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလားရာအပေါ် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဂူတာရက်စ်က ဆိုသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် “အရေးပေါ်အနေအထား”ကို စတင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံအားလုံးက “တောက်လောင်မည့်မီးကို ငြှိမ်းသတ်ရန်” အပြည့်အဝ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ （Xinhua）
(220122) — UNITED NATIONS, Jan. 22, 2022 (Xinhua) — UN Secretary-General Antonio Guterres briefs the UN General Assembly on his priorities for 2022 at the UN headquarters in New York on Jan. 21, 2022. Antonio Guterres on Friday raised five alarms for the world for 2022. (Eskinder Debebe/UN Photo/Handout via Xinhua)